Raha diso fanantenana tamin’ny Netflix, aiza isika no hijery ireo andian-tantarantsika ? · Global Voices teny Malagasy
Raha diso fanantenana tamin'ny Netflix, aiza isika no hijery ireo andian-tantarantsika ?
Voadika ny 02 Janoary 2020 12:00 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français
ireo doka an'ny Netflix hitan'ilay alika “Taro” tao amin'ny wikimedia commons.
Koa satria efa lany paika izao ny Netflix, ary tsinjon'ireo mpampiasa aterineto fa tsy manana akory ny atao hoe “quint flush’ izy, dia indreo fa mipotsaka ny mason-dry zareo (zendana tanteraka): mbola tsy mety afa-po hatrany mitady andian-tantara, saingy tsy afaka manome fahafahampo io firangorangoana io. Ao anatin'ny lalaony dia mbola manana fomba maro mahomby ny Numericable, izay nanomboka ny LaBox Séries tamin'ny fotoana nanombohan'ilay sehatra amerikàna SVOD, ary mikasa ny hampahafantatra azy ireny ato anatin'ny volana vitsy ho avy. Tsy mbola very akory ny zavatra rehetra raha ho an'ireo mpiondana andian-tantara, sy ireo hafa.
Tsy nitsitsy zavatra hosoratana natokany ho an'ny Netflix natomboka tamin'ny 15 Septambra 2014 ireo mpanao gazety, mihazakazaka hamoky ‘vaovao manandanja matsiro’ an'ireo mpampiasa aterineto. Nanomboka tamin'izany ireo Frantsay no efa nanome ny heviny, nefa izy ireny tsy nifanaraka tamin'ireo fampanantenana natao am-boletra. Taorian'ny fandalinana lalina, toa mazava fa tsy niomanan'ny Netflix ny amin'izay zavatra takian'ny kolontsaina frantsay ary dia voatazon'ny Numericable ny tombony amin'ny fahafantarana bebe kokoa ny mpanaraka sy mpihaino azy.
Porofon'izany ny lahatsary tsy tapaka alefan'i Frank Underwood mamadika ho amin'ny fomba mahatsikaiky ny fandefasana ilay andian-tantara « Fais pas ci fais pas ça » (Aza manao an'itsy, aza manao an'iroa) nojeren'ny olona iray antsoina hoe Kevin Spacey, olona misongadiana ao anatin'ilay andian-tantara House of Cards, tena nangaina tanteraka. satria io no iray isan'ny tena hadisoam-panantenana hita tao amin'ilay sehatra: ilay andian-tantara novokariny izay tena nahita fahombiazana hatrany ivelan'i Atlantika aza tsy ho hita ao akory. Eny, an'ny Canal Plus ny zo amin'izany.
Taorian'io hadisoam-panantenana io dia tonga daholo koa ny hafa rehetra. Olona iray mpampiasa aterineto no niandraikitra ny fanaingoana ny fihenàn'ilay lisitra nandritra ny namakivakiany an'i Atlantika, tamin'ny fananganany fàfana iray fampitahàna ireo andian-tantara rehetra azo raisina ao amin'ny Netflix amerikàna nefa tsy ao anatin'ny lisitry ny Netflix frantsay. Misy tena maro tokoa. Ny fiavahan'ny kolontsaina frantsay ve no antony ? Angamba. Na izany na tsy izany, vetivety ilay tsy fahafahana manana safidy maro dia nampangatsiatsiaka ireo tena nanana firehetampo nisafidy ny handany vola betsaka kokoa fa tsy nionona tamin'izay kely mba nisy, na ireo zavatra tranainy.
Benjamin Fau, bilaogera ao amin'ny vondrom-piarahamonina Express, no manao famintinana ireo tanjaka sy fahalemen'ny Netflix ao Frantsa ary manamarika ohatra fa:
Ho an'ireo mpankafy andian-tantara somary efa tranaininainy ihany, ka mihevitra ny hanenjika ny fahataràny, dia tena toy ny paradisa kely tokoa io. Saingy tandremo anefa, raha toa ny fitiavanao manaraka andian-tantara ka manosika anao hanaraka akaiky manokana andiany iray avy amin'ny nandefasana azy voalohany tany Amerika, raha tianao ny Game of Thrones na ny Doctor Who-nao mba hisy soratra mandady dieny ny ampitson'iny ‘namoahana’ ny fizaràna vaovao tohiny, ndeha ny làlanao no zory.
Satria ilay sehatra, voatery ihany koa manaja ny lalàna frantsay amin'ny resaka fifampitohizana ara-potoan'ny media, dia tsy afaka ny handefa sarimihetsika mbola tsy ampy 3 taona. Raha tonga ao an-tsainao ny famoromporonan'ny saina hoe te-hiditra anaty lisitr'ireo sarimihetsika rehetra tsy azonao jerena, ny tranonkala Vodkaster dia nitahiry azy rehetra ho anao ao amin'ny Notflix.fr (fanamarihana: toa efa tapaka ny rohy).
Aorian'ny hadisoam-panantenana tahaka izany, misy sehatra hafa maro hanararaotra ilay hoe “ny atao no miverina”. Numericable no nanomboka azy. Amin'ny fanomezana « fidirana tsotra, mahafinaritra sy narafitra araka ny filàna » aminà « fizaràna miisa 3000 isambolana ho an'ireo rehetra misoratra hampiasa ny LaBox Fibre », ny felaka nanjo ny Netflix no tsy maintsy nampiakatra ny katalaogin'ity mpandraharahan'ny ‘tariby’ ity. Ny mampifanaraka ny LaBox amin'ny zavamisy fotsiny no ilainao mba hidirana aminà vontoaty izay azo antoka tsara fa ‘HD’ (sary mazava).
Hatreto aloha, tsy hoe maimaimpoana daholo ireo fizaràna miisa 3.000 ao. Fa afaka mahatoky ireo mpampiasa aterineto, mbola mivoatra miandalana io, araka ny fanomezantokin'ny filoha tale jeneraly, Jérôme Yomtov :
Hisy ireo andian-tantara hanatevina ny lisitry ny famandrihana maimaimpoana, atsy ho atsy ato anatin'ny taona, saingy androany aloha, mbola mila aloa vola izy ireny vao azo.
Tsy mbola niverina, araka izany, ny fotoana manasatra itadiavana ireo andian-tantara any anatin'ireo sehatra fandefasana ‘streaming’ tsy azo antoka loatra. Hisy ireo andro mamiratra hitsena ny mpampiasa aterineto. Ndeha isika hifanamby fa tsy ho ela izy ireny dia ho tonga.